Izimpawu zokufakelwa kombungu. Izimpawu zokufakelwa kwe-embryo sekwephuzile
Izibonakaliso zokuqala zokufakelwa kombungu owesifazane angakwazi ukumbona ekuqaleni kwesikhathi sokutshala. Kodwa akusilo iqiniso ukuthi ummeleli wesilisa ocansini ephathekayo endaweni "ezithakazelisayo" uzozizwa zonke izinguquko emzimbeni wakhe kusukela ezinsukwini zokuqala zokukhulelwa. Kodwa-ke, amantombazane amaningi angachaza ngokuqiniseka imizwa ethize lapho ukufakelwa kombungu. Zonke izinzwa ezitholakala kule nkathi emzimbeni wesifazane, sizobe ngezansi.
Ochwepheshe bakholelwa ukuthi kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi yiziphi izimpawu zokufakelwa kombungu. Lokhu kungenxa yokuthi leso sikhashana sokuzalwa kwempilo entsha ingenye yezikhathi ezibucayi nezibalulekile zokukhulelwa. Leli qiniso lichazwa ukuthi i-fetus yesikhathi esizayo yomzimba womama inokwakhiwa kwesakhi sofuzo. Ngemuva kwalokho, njengoba kuyaziwa, isigamu sezakhi zofuzo zengane sikayise (isethi yama-haploid - 23).
Inqubo kanye nezibonakaliso zokufakela embryo esibelethweni
Ngemuva kokuba iqanda lihlwanyelwe yi-spermatozoon futhi i-embryo yenziwa, isingeniso sayo esakhiweni se-uterine senzeke, okungukuthi ungqimba lwayo lwe-mucous surface. Kulesi simo, i-villi, ese-embryo, ngesikhathi sokungena emzimbeni wesibindi kuyingozi kakhulu, okwenza kube negazi elincane. Ngaphezu kwalokho, i-embryo ekugcineni igxile eludongeni lwangempela futhi iqala kancane kancane.
Njengomthetho, wonke owesifazane uthatha umzuzwana ngalezi zikhathi ezahlukene. Kodwa ngokuvamile kuvame ukutshala ukuqhutshwa kusukela ngosuku lwesishiyagalolunye kuya ku-14 emva kokukhulelwa ngokushesha.
Kumele kuqashelwe ngokukhethekile ukuthi ngalesi sikhathi umbungu usuvele unamapheshana amabili embryonic, ukuze ube ngqo - ngaphandle nangaphakathi. Kusukela kulesi sici sokugcina esikhathini esizayo, i-fetus izokhula, futhi kusukela engaphandle i-trophoblast okuthiwa, isisekelo se-placenta. Yiqabunga elinikeziwe elizodlala indima ebalulekile esimweni esijwayelekile sokukhulelwa kanye nokuthuthukiswa kwengane. Futhi lokhu kungenxa yokuthi unesibopho ngokugcwele ekuthuthukiseni izinto ezikhethekile ezivimbela umzimba womama ekuhlaseleni, bese uqeda izithelo ezizalwe.
Izici ze-embryo implantation
Mayelana nokuthi izibonakaliso zesisu sezibelethweni esibelethweni zibonakala kubesifazane, sizochaza okuncane. Manje ngifuna ukuchaza ngokunembile ukuthi lo mzuzu othize okwenzekayo.
Indawo yokufakelwa kwe-embryo zibe izicubu ze-uterine cavity ikhula, iqoqa amanzi, i-glycogen ne-lipids. Le nqubo ekwenzeni ukwelashwa ibizwa ngokuthi ukusabela okungajwayelekile. Njengoba kukhulunywe ngenhla, ukungapheleli kwe-mucosal kwenzeka futhi kwegazi elincane kwenzeka. Phakathi nenqubo enjalo, owesifazane angase abe nomuzwa wokuthi u-malaise omncane, futhi ubheke ukushisa komzimba okuphakeme (37-37.5 ° C).
Kumele uqaphele ukuthi izimpawu zokufakelwa kombungu emva kokudluliswa kokukhulelwa okungekho emzimbeni akufani neze nokuzalwa kwemvelo nganoma iyiphi indlela. Kodwa izimpawu zibaluleke ngempela kumama wesikhathi esizayo. Phela, kuyisiqiniseko sokuthi inqubo yokukhulelwa iphumelele, futhi manje owesifazane unethuba lokukhuthazelela ingane enempilo futhi enamandla. Ngaphezu kwalokho, izibonakaliso ezicacile zokufakelwa kwe-embryo ngemva kwe-IVF kusho ukuthi ukuphendulwa kokulahlwa akuzange kwenzeke, futhi amathuba okuthi ukukhulelwa kuzophazanyiswa usuku ngalunye kuhla kakhulu.
Akuwona wonke umuntu owazi ukuthi izimpawu ezisemqoka zokufakelwa kombungu emgqonyeni wezinyosi zihlukaniswe zibe izinhlobo ezimbili, okungukuthi, ezizithobayo kanye nomgomo. Cabanga konke ukuboniswa kwe-embryo isingeniso esibelethweni ngokuningiliziwe.
Izibonakaliso ezingezansi zokufakelwa kombungu
Kulezi zimpawu kungenzeka ukuthi uthwale okulandelayo:
Ukwehlisa, ukudonsa noma ukusika ubuhlungu esiswini esingaphansi;
Ukwesaba, ubuthakathaka, ukulala nokuthukuthela;
Ukuzwa kwe-scrapers nokushaywa emgodini we-uterine;
Umzwelo we-malaise jikelele nokukhathala;
Ngokuvamile izibonakaliso zokufakela embramu zikhumbuza abesifazane besimo ngaphambi kokuqala kokuya esikhathini.
Kumele kuqashelwe ukuthi esinye sezibonakaliso ezivame kakhulu nezokuqala zokusungulwa kombungu esibelethweni kungumzwelo wokunambitheka kwensimbi emgodini womlomo, okuhambisana nesicashunwe esincane. Ukukhumbula ukuthi izolo kudakiwe noma kudliwe, abesifazane abaqageli ukuthi okwamanje embrusheni wabo uzimisele ukuthuthukiswa okuqhubekayo.
Izimpawu ezihlosiwe zokufakelwa kombungu
Izici eziveziwe zihlanganisa:
Igazi elincane noma ama-swabs ezambatho zangaphansi.
Ukwanda okungadingekile ekushiseni komzimba ukuphawula emazingeni angu-37 no-37.9. Kumele kuqashelwe ukuthi isimo esinjalo se-pathological singenzeka kowesifazane ngenxa yezifo ezithile. Yingakho kunconywa ukuba uthintane nodokotela.
Ukudalula i -gonadotropin ye-chorionic emcinini noma ngegazi kummeleli wesifo obuthakathaka. Ngaphezu kwalokho, ukutholakala kwaleli hormone ohlelweni lokucwaninga kwelabhoratri kuyisiqinisekiso sokuthi ukukhulelwa sekufikile, kanti umbungu usungenwe ngempumelelo emgodini wesibeletho.
Ngandlela-thile, abesifazane bavame ukubona ukufakelwa kwe-embryo ngokushesha. Izimpawu zenqubo enjalo kanye nekhwalithi ye-embryo azifani nokusungulwa kokuqala kweqanda elikhuliswe emkhunjini.
Kumele kuqashelwe ukuthi akuyona njalo izinga lokushisa komzimba lapho ukwethula umbungu kubeletho kukhula. Ngezinye izikhathi kungase kuhlale kuvamile noma kuhliswe kancane. Futhi, akubona bonke abesifazane ababukela ukukhipha igazi. Ngokuqondene nokuzwa okungathandeki esithombeni esingaphansi, lesi sibonakaliso siyaziwayo cishe cishe wonke umuntu omele ubulili obuhle ngesikhathi sokubelethwa kwe-embryo. Kulesi simo, le mizwa ingahluka ngokuphawulekayo ngokwemvelo nangamandla.
Njengomthetho, phakathi naleso sikhathi, abesifazane bangabheka izindawo zegazi, okulula kakhulu uma kuqhathaniswa nokuya esikhathini, futhi kuncane kakhulu. Uma unesisu esinamandla, uhambisane nobuhlungu esiswini esingaphansi, kufanele uthintane nodokotela ngokushesha. Phela, lesi simo singabonisa ukuqedwa kokukhulelwa.
Kumele kuqashelwe ukuthi phakathi nokufakelwa kukhona okuthiwa "ukukhethwa kwemvelo". Ngamanye amazwi, ama-ovules athuthukayo angenasifo futhi angenalutho anqunywe ngumzimba womama, okuvimbela impilo yemibungu nganoma yikuphi ukuphazamiseka noma pathologies.
Smear kusuka ekhaleni kuya eosinophils. Uyini lo cwaningo?
Izithombe nesithombe ukucubungula. Imiphumela Ukukhanyisa ku-Photoshop
Stone zlatolit: Umlando, Properties futhi Izicelo